अरुको रंग , ढंग, बोली, ब्यबहार र छालाभित्र आफ्नो प्रतिबिम्ब बेचेर रित्तिएको समाजको प’लायनबादी चेहरा म हैन : ज्वाला संग्रौला – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
अरुको रंग , ढंग, बोली, ब्यबहार र छालाभित्र आफ्नो प्रतिबिम्ब बेचेर रित्तिएको समाजको प’लायनबादी चेहरा म हैन : ज्वाला संग्रौला
#यहाँ डराएर र जिब्रो च’पाएर बोल्ने दिन गए। आफु त जे बोलिन्छ सीधा बोलिन्छ। औकात , आचरण , बिबेक , क्षमता र ढं’ग नभएका समाजका ने’गेटिभ र बाँगा पात्रहरुलाई सीधा कुरा नपच्नु स्वभाविक छ! बाँकी धेरै स्वतन्त्र नागरिकहरुले मेरो कुरा जा’यज मान्नु हु्न्छ, पढ्नु हु्न्छ , सेयर गर्नु हुन्छ र हौसला दिनु हुन्छ।
सबैतिर ठिक्क पार्दै यो पनि सहि त्यो पनि सहि भन्दै हिँड्ने हो भने गु’ण्डाको नजरमा पनि प्यारो बन्न सक्ने कला म मा छ । तर मेरो आदत त्यस्तो छैन। किनकी असल र ख’राबहरुलाई छुट्टाछुट्टै डालोमा राखेर हेर्नु पर्छ ! धेरैजना यहाँ यस्ले पो के भन्ला कि उस्ले पो के भन्लाकी भनेर त्रासै त्रासमा ग़’लत बि’रुद आवाज उठाउने हिम्मत गर्दैनन् !
यो देख्दा यस्तो लाग्छ कि सायद एक्लो लडाकु त म मात्र रहेछु जस्ले बिगत देखि बर्तमानसम्म हरेक बे’थितिहरु बि’रुद छेपारो जस्तो रंग नफेरी जेहाद छेड्दै आएकी छु! म सहि बाटोमा छु भने मलाई कसैको धम्की डर र गु’ण्डागिरीका भाषाले एक इन्च छुँदैन ! यसर्थ मेरो आफ्नो नारा “म बोल्छु” मार्फत जीबनभर कसैको मानो नखाएर दलाल, भ्रस्ट, कमिसनखोर लगायत समाजका तमाम बि’कृतिहरुबिरुद निरन्तर बोल्ने प्रण पनि गर्दछु !
जस्ले मलाई जे तरिकाले हेरें पनि म बे’पर्बाह ग़’लत प्रबृति र पात्रको नजरमा सँधै यस्तै बि’द्रोही र छु’ची बनेरै हिँडिरहन्छु! सबैलाई ब्यालेन्समा राखेर आफु गतिलो देखिनु भन्दा गलतलाई ग़लत भनेर आफू एक्लिनुमा गर्व गर्ने मान्छे हुँ म।
केहि पानीमरुवाहरु मेरो मनोबल गिराउन र मलाई ख़’राब देखाउन समाजसेवी त यस्तो पो हुनुपर्छ त भनेर अन्य ब्यक्तिहरु सँग तुलना गर्दै मलाई आ’चरण र सभ्यताका बेतुकका मन्त्रहरु पढाउन खोज्छन्! दया लाग्छ तिनीहरुलाई देखेर जो जीबनभर आफू आफूजस्तो बन्न भुलेर दोस्रोको काँचुलीभित्र गु’जुल्टो परेका छन्!
अरुको रंग , ढंग, बोली, ब्यबहार र छालाभित्र आफ्नो प्रतिबिम्ब बेचेर रित्तिएको समाजको प’लायनबादी चेहरा म हैन ! म जे हुँ पुरापुर यति हुँ र म आफू भएर आफ्नो रंगमा बाँच्नुमा बेहद गर्व गर्छु! कसैले मलाई पैसा उठाउने सामाजिक अभियन्ताको ट्या’ग नभिराउनु होला , त्यो त मानिसहरुको समयले दिएको पीडा केहि मिनेट सान्त बनाउने मेरो सानो प्रयास मात्र हो! म आफूलाई अन्याय बि’रुद आवाज़ उठाउने ब्यक्ति भनेरै सबैलाई प्रस्ट र खुलस्त भन्न चाहन्छु !
पैसा उठाएर समाजसेवा त जस्ले पनि गर्न सक्छ तर अन्यायको बि’रुद्द मिसाईल बनेर उत्रिने हिम्मत थोरैमा हुन्छ , जुन ममा भरपुर छ ! त्यसैले मैले पैसा उठाएर समाजसेवा गर्नु भन्दा पनि भ्र’स्टहरुको टाउकोमा बम फोर्दै हिँड्नुमा देशलाई अझ बढि मद्दत पुग्ने कुरा मनन गरी समाजका ख़राब प्रबृति र पात्रहरु बि’रुद धा’वा बोल्दै झन् शसक्त ढंगले अगाडि बढ्ने पनि प्र’तिबद्धता ब्यक्त गर्न चाहन्छु !
म घमण्डी , ई’गोवाली र भाईरल देखिन सक्छु दुईचार खराबहरुको नजरमा , तर सैयौं अ’सलहरुको भिडले आजपनि मलाई आँखा चिम्लेर यो केटी सत्यको बाटो हिड्ने ईमानदार ब्यक्ति हो भन्ने दम राख्न सक्छ !! 🇳🇵🇳🇵👈👈
Previous आँ’चलको ले’हेंगाको आलोचना समाजका दुई ब’र्गबीचको ट’करावबाट उठेको धुँवा हो!
Next एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर समाजमा मिलेर बस्नुनै सहि अर्थमा मानवता को सच्चा प’रिचय हो : नारायण धिताल